Du’a Joorj H. W. Buushiif Roobiin Dhufu Akka Guyyaa Gadda Biyyolessaa Tahu Labsame
Muddee 03, 2018
Prezidaant Doonaald Traamp, ka Jimaata dabre umurii isaanii 94ffaatti du’aan boqotan – prezidaantii Yunaayitid Isteetis duraanii – Joorj H. W. Buushiif, Roobii dhufu guyyaa gaddaa biyyoolessaa akka tahu labsanii jiran.
Gara xumura lola Addunyaa qabbanaawaatti ka taayitaa qabatan – prezidaantiin Yunaayitid Isteetis 41ffaan – Joorj Buush, gamtaa biyyoota Addunyaa, bara 1991 humnoota mootummaa Abbaa-Irree Saadaam Huseen, Kuweet keessaa baasan nama hoogganana turan.
Bara mootummaa Buush marsaa duraa keessatti kan tajaajilanii turan – ministarri dantaa alaa Yunaayitid Isteetis duraanii – Jams beeekerii fi ministarri ittisaa fi itti-aanaa prezidaantiin duraanii – Dik Cheenii, du’aan boqochuu Buush ilaalchisuun, Televiiziyoona FOX NEWS irratti dubbatanii turan. Mr. waa’ee Joorj HW Bush ennaa dubbatan -
“Inni nama fiingee ofii hafuufe miti. Amala isaa hedduu gaarii keessaa tokko, hojii tokkotti akka namoonni biroon maqaa itti fudhatan itti dhiisa. Kun amala inni itti guddatee fi ittiin hojjete. Yoo deemtee galmee seenaa isaa ilaalte, prezidaantiin baay’ee cimaa, keessumaa gama dantaa alaatiin bu’aa guddaa galmeessian turan – jedhan.”
Dik Cheeniinis, akkanatti waa’ee Buush ibsan.
“Hoogganoota biyyoota alaa waggoota hedduu waliin hojjetee nama wal-beekumsa qabu, waa’ee raayyaa waraanaa nama hubannaa qabu, raayyaa waraanaa deggeruuf nama fedhii qabu. Waraana galoo-galaanaatti bobba’uu keenya dura dhimmoota hedduu tarreessinee gaafanne. Tokkollee deebii hin dhorkanne. Hunda isaa nuuf mirkaneessee, maal akka gootan natti agarsiisaaa jedhe”jedhan – Mr. Cheeniin.
Dura-taa’aan hoogganoota waraanaa fi gorsaan naga-eegumsa biyyoolessaa duraanii – Koolin Paawol – prezidaantidchi Yunaayitid Isteetis 41ffaan – kan bara waraana Addunyaa lammaffaatti doonii waraanaa oofaa turan, gatii waraansi nama baasisu waan beekaniif, akka lolli galoo galaanaa hafu hedduu yaalanii turan – jedhanii, Bush – jireenya qulqullaawaa, dhugaa fi gad of qabuu jiraachuu isaanii dhugaa bahan.
Reeffi prezidaant Joorj HW Buush, har’a irraa jalqabee haga Roobii dhufuutti ka “Capitol Rotunda” jedhamu, iddoo waajira mana-maree Yunaayitid Isteetis keessa tura. Eega geggessaan Kaateediraala Biyyoolessaa keessatti geggeeffameefii booda, Laayibiraarii Prezidaantummaa Buush, ka Teeksaas jiru keessatti awwaalama.